Testimonials | Shwe Web Hosting | Myanmar
သုံးခဲ့သမျှ Hosting တွေထဲမှာ Shwe Hosting ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
Ko Hein Thu Aung (Freelance Web Developer)
Shwe Hosting သုံးရတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Shwe Hosting ဝိုင်းတော်သားတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း အားရကျေနပ်မိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးသော Hosting ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Shwe Hosting ကိုဘဲ လမ်းညွှန်ပါရစေ။
U Soe Tun Naing (KSL Media)
Hosting ဝယ်ရင် တကယ်တမ်းကျ တော့ ဈေးနှုန်းက အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဗျ။ Service ကောင်းဖို့နဲ့ Reliable ဖြစ်ဖို့ အဓိကပဲ။ ဒီအချက်တွေကြောင့် ကျွန်တော် Shwe Hosting ကိုပဲ သုံးဖြစ်နေတာပေါ့။
Ko Aung Zaw Tun (Orient - Software Development)
တခြား Hosting တွေထက် Shwe Hosting ကိုပိုကြိုက်တာက
၁။ မြန်မာတွေမို့ ပိုအားပေးတယ်
၂။ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်
၃။ မြန်မာလို ပြောလို့ရတယ်
၄။ ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းတာရယ်ကြောင့်ပါ
Ko Myo Min Tun
Shwe Hosting သုံးရတာ ကျနော့်အတွက်တော့ အတော် အဆင်ပြေတယ်။ ကျနော်က technical အားနည်းတော့ ခဏခဏ အကူညီတောင်းရတယ်။ အကူညီတောင်းတိုင်းလည်း Support team က နေ့မကူးဘဲ အကူညီပေးတယ်။ အဖြူရောင် မိသားစု ရော၊ ပန်းလောင်မြေရော website ၂ ခုလုံး shwe hosting မှာပဲ လုပ်လာတာ ၃ နှစ်ရှိပြီ။ ပြောစရာဆိုလို့ တစ်ခွန်းပဲ ရှိတယ်ဗျာ။ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။
Ko Moe Khet Nwe (ပန်းလောင်မြေ စာရေးဆရာများ အသင်း)
Director Ko Wunna Kyaw (Film Maker, MIRACLE POST)
Hosting ဝယ်ဖို့ရှာနေတယ်ဆိုရင် Shwehosting မှာဝယ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Ko Wai Lynn Oo (Freelance Web Developer)
We have hosted our site with ShweHosting. Service, support and quality have been very satisfactory. It is the abosolute great value for money, the real gold.
Pi Hom Saihkay (Myanmar City Star Travel & Tours Co., Ltd.)
Shwe Hosting ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဟာ The Occupiers တီးဝိုင်းအတွက် အရမ်းကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဈေးနှုန်း၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အကောင်းဆုံးလိုချင်ရင်တော့ Shwe Hosting ကိုသာ ဆက်သွယ်ပါလို့ပြောပါရစေ။
Ko Thang Kim (The Occupiers Band)
Shwe hosting is convenience for Shwe Myanmar and their services are provided whenever you face with technical problem. I like Shwe!
Ko Aung Aung (Ideology Web Studio)
မြန်မာနိုင်ငံက အဆင်ပြေပြေ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်သလို သုံးစွဲရတာလည်း အဆင်ပြေတဲ့အတွက် Shwe Hosting မှာပဲ ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါတယ်။ မိတ်ဆွေများကိုလည်း မျှဝေ သုံးစွဲစေခဲ့ပါတယ်။
Ko Hteik Tin Aung
brahmaso.org, ourmandalay.info, ourmandalay.net
The hosting service was reasonably priced and it provided great value for money. We always get good response to our requests and communication with Shwe Hosting has always been straightforward and smooth. Whenever problems arise, the team provided solutions inashort span of time to our satisfaction. Overall the service is nice and we will recommend it to any entrepreneur seekingahosting service provider.
Ko Thuta Aung & Ma Shwe Thiri Khit (DesignPOT)
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Shwe Hosting က တာဝန်ယူပါလိမ့်မည်။
Ko Aung Zaw Lin (Myanmar Web Corner)
Shwe Hosting သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မူလည်းကောင်းပါတယ် မြန်လည်းမြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကနေ ဝယ်ချင်းသူတွေအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အတွက် တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
Ko Tun Aung Phyo
Shwe web hosting isacool hosting so I recommend all Burmese people to use this hosting :)
U Min Justin (GMS - UK)
Shwe Hosting က Domain Hosting ဝယ်တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ တန်လဲ တန်တယ် လုပ်ပေးတဲ့ Support team ကလဲ သဘောကောင်းတယ်၊ ကိုယ်တိုင်ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပဲ အဆင်သင့် အားလုံး လုပ်ပေးပါတယ်။
Ko Han Htet San
I am using Shwe Hosting's Reseller plan foracouple of years and I haven't got any problem with the server and technical issue. I love shwe hosting very much!!
Ko Phyo Nyi (Golden Dagon Co., Ltd)
SCA-UK have been with NetScriper (Shwe Hosting) more than5years now and so far we satisfy with the services. Our SCA-UK website is hosting successfully because of NetScriper. We are happy with the continuous supports from the developers. The website loads inagood speed. Even though there was some problem with the email system, NetScriper service could cover the problem effectively and give the user supports for further in the limited time. We hope Shwe Hosting (NetScriper) will be always there asaexcellent hosting service provider.
Ma Nang Aye (Shan Cultural Association - UK)
Shwe Hosting ကိုသုံးရတာ ကြိုက်တယ်၊ ကျွန်တော်က Freelance ဆိုတော့ အလွယ်တစ်ကူ Client ကိုလုပ်ပေးဖို့၊ တင်ပေးဖို့ ခက်ခဲတာမရှိအောင်ဖန်တီးပေးထားလို့ ကျေနပ်ပါတယ်... နည်းပညာပိုင်းလည်း ဒီကို mail နဲ့ပို့ပို့ chat မှာရိုက်ရိုက် အကုန်လုံးအစစအရာရာ ရှင်းပေးတယ် ပြောပြတယ်ပေါ့... ဒါပါဘဲ မြန်မာလိုပြောလို့ရတယ်၊ မြန်မာလိုပြန်ဖြေမယ် ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူ တိုးတက်ဖို့ကို SHWE HOSTING ကိုဘဲယုံတယ်...
Ko Win Thaw (iSTREAM Freelance Web Development)
'Like' လုပ်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ Coupon code များ၊ Discount များ ရယူပါ။